Abakhiqizi be-Resistance band - I-China Resistance band Factory & Abahlinzeki
Ama-Custom Fabric Resistance Bands peach hip circle circle booty bands
I-Hip band eyenziwe nge-polyester nosilika we-latex, ngakho-ke singenza umfutho ohlukile Ngokuvamile, usayizi ojwayelekile ngu-S / M / L, S = 66cm ubude, M = 76cm ubude, L = 86cm ubude, Konke lokhu kubanzi kungu-80mm ububanzi. Vele, ungenza amandla ezingeni lamandla ahlukile uma udinga.
Ama-2021 Best Natural latex tube 11pcs 12pcs Resistance band set set upper body exercise tube sets with cover safety cover
Ibhande ngalinye lihlukile ngemibala namazinga wokumelana: Okuphuzi - 10lbs, Blue - 15lbs, Red - 20lbs, Green - 25lbs, Black - 30lbs, ngenani lokumelana nesisindo esingu-75lbs. Ungaguqula ukuqina komoya ukufeza izinhloso zakho ngokusebenzisa ibhendi eyodwa noma ukuhlanganisa amabhendi amaningi, alungele abaqalayo noma ochwepheshe, abesilisa, abesifazane, intsha noma izingane.
Ukuthengiswa Okushisayo Ingalo Khuphula Amandla Okuqeqesha 8 Umumo Wokuzivocavoca Ishubhu Lokuzivocavoca
Igama: 8 uhlobo lwe-strecth band
Usayizi: 40 * 15cm
Umbala: Pink, Purple, Blue, Custom
Ibhendi ye-TPE yoga yangokwezifiso, Ibhendi lokumelana neRubber Yokuzivocavoca, Ukuqina kokuzivocavoca kweLatex theraband yamahhala
Ithanga linokuqina okuhle, futhi lisebenza kahle nokunyakaza kokuqeqeshwa kweyoga ukufeza ipulasitiki elingcono. Ifanele abantu abasha nabesifazane abanamandla aphansi. Ingakwazi ukwelula futhi isebenzise yonke imisipha yomzimba, iqinise ukuma futhi ilawule ibanga lokwelulwa, ithuthukise ngempumelelo ikhono lomsebenzi womzimba, futhi ilolonge ijika lomzimba elifanele. Kungakhulisa ubumnandi bokuzivocavoca futhi kushintshe isitayela sokuzivocavoca esisodwa.
Ifektri yokunikezela nge-latex elula yokuzivocavoca amandla wokumelana namandla ibhendi yeLatex idonsa ibhendi yokusiza
Okokuqala, lokhu kungumkhiqizo wokuzivocavoca onobuhle obenziwe nge-latex yemvelo eyi-100%, Lokhu kwenza ukuthi kube nokuqina futhi kube nokusimama ukusetshenziswa.Ngaso leso sikhathi, i-latex ivela eMalaysia, ikhwalithi iqinisekisiwe. i-usuallty esetshenziselwa ukuqeqesha amandla noma ukuvivinya imisipha, ungayisebenzisa ejimini noma ekhaya.
I-High Quality Marble Pattern Fitness Booty Band Exercise Hip Circle resistance Bands For Workout bandas de resistencia
Ibhande lendwangu esezingeni eliphakeme ngokuphrinta kwezilwane okujabulisayo - yakha amandla we-hip ne-hip ngalezi zinqa zokuphrinta zezilwane ezimnandi. Ibhande lesinqe le-NQ 3-intshi (cishe u-7.6 cm) lebhande le-hip lingabeka kalula izinkalo, izinqe nemilenze ukusiza ukushintsha umzimba ongezansi. Ngaphambi kokuzivocavoca umlenze, sebenzisa ibhande lethu le-anti-skid hip ukwenza i-hip isebenze, yisebenzise ukukhulisa amandla ngesikhathi sokuzivocavoca umlenze, noma njengokuvivinya umlenze noma ukuvivinya umlenze ngemuva kokuvivinya umlenze.
Isitolo esidayisa yonke impahla Latex 11 PCS Resistance Tube Band Setha Izinsiza kusebenza ze-Yoga Equipment Factory Training China Supplier
Ukumelana neshubhu leshubhu kufaka phakathi amashubhu ama-5 latex, izibambo ezi-2, ama-buckle ama-ankle ama-2, isibambo somnyango nesikhwama sendwangu. Mayelana namashubhu e-latex, sinokubomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuphuzi, okumnyama, okuluhlaza okuzosethwa, ezinye izesekeli zimnyama. Imvamisa, La mashubhu amahlanu anama-lbs ahlukene, angama-10lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs, 30lbs. Lokhu ngosayizi ojwayelekile, kepha akuyona ukuphela kokukhetha, ungakhetha noma yimaphi ama-lbs ofuna ukuwahlanganisa.
Ijimi lokuzivocavoca umzimba elenziwe ngokwezifiso i-logo ye-Yoga Stretch Band Latex yokuzivocavoca i-mini loop band band band sets
Kuphephile futhi Kuhlala Isikhathi eside: Kwenziwe kusuka ku-100% latex yemvelo, okungenabuthi nephunga mahhala futhi nokunwebeka nokuqina okusebenzayo: Kukulungele ukuqina, ukubumba umzimba, ukwehlisa isisindo, ukuqeqeshwa ukumelana namandla, ukuqeqeshwa kwamandla, ukubuyiselwa kwangemva kokubeletha, ukuvuselelwa kokulimala nokuningi okulula ukukusebenzisa: Okuhlukile ukungaguquguquki nokuqina kwanoma yikuphi ukuvivinya umzimba okunika inselele; mane ushintshe isikhundla sakho ukukhomba imisipha ehlukene ezingalweni, esifubeni, esiswini, e-gluteus, emilenzeni, ekwakheni zonke izici zomzimba wakho futhi uthuthukise zonke izici zempilo yakho
IHight Quality Gym Exercise Rubber Workout Stretch Elastic Pull Up Floss Assist Bands
1. Ibhendi yenziwe nge-100% latex enokunwebeka okuphezulu, ukuguquguquka nemibala egqamile.
2. Ilungele ukuqeqeshwa kwamandla, ukucinana kokuminyanisa nokuzivocavoca ukuhamba.
3. Seamless, akukho bubble, ukufana kombala, anti-ukuguga, ukumelana ekuqaleni, futhi bushelelezi kakhulu ngaphandle imihuzuko.
I-Gym high elasticity logo yenza umsebenzi wokuzivocavoca umzimba we-11pcs wokumelana nama-band tube
I-NQ Sport yokuzivocavoca ukuqina kwebhendi yeluphu ebekelwe i-Gym yokuzivocavoca
I-latex yemvelo eyi-100%, Inezinzuzo zokuzwa okuhle kokuthinta ngesandla nekhwalithi ephezulu, akulula ukugqashula nokuvikelwa kwemvelo kakhulu.Ngokujwayelekile, ubude obujwayelekile bungu-50cm / 60cm, ububanzi obujwayelekile bungu-50mm, obunye ubungako obufunayo bungenziwa ngokwezifiso. Siphinde sibe nokunye ukukhetha kwebhande elincane elenziwe ngezinto ze-TPE ezicabangela ukungezwani komzimba ne-latex kwabanye abantu. Womabili la mabhande ayizikhwepha zokuqina.
I-Specialty Manufacturer Hip Circle Band Ngokwezifiso Ilogo China Factory Supplier Pink Body Band
I-Hip band eyenziwe nge-polyester nosilika we-latex, ngakho-ke singenza ukuqina okuhlukile.Ngokujwayelekile, usayizi ojwayelekile ngu-S / M / L, S = 66cm ubude, M = 76cm ubude, L = 86cm ubude, Konke lokhu kubanzi kungu-80mm ububanzi. Vele, ungenza amandla ezingeni lamandla ahlukile uma udinga.